क्यारेवियन लीगको ड्राफ्टमा ४ नेपाली क्रिकेटर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
क्यारेवियन लीगको ड्राफ्टमा ४ नेपाली क्रिकेटर
काठमाडौं । क्यारेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) ले यो वर्षका लागि लीलामीमा समावेश हुने खेलाडीको ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको ड्राफ्टमा नेपालका ४ जना खेलाडी समावेश गरिएको छ ।
सीपीएलका अनुसार नेपालका दुईजना बलर र दुईजना मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान ड्राफ्टमा अटाएका छन् । विश्वभरकै फ्रेन्चाईज क्रिकेट खेलका र यसअघि पनि सीपीएल खेलिसकेका सन्दीपसँगै सोमपाल कामी, दिपेन्द्रसिंह ऐरी र रोहित पौडेल ड्राफ्टमा अटाएका हुन् ।
आगामी मे २२ मा लण्डनमा हुने अक्सनमा कुनै टिमले किने यी नेपाली खेलाडीले क्यारेबियन प्रीमियर लीग खेल्न पाउनेछन् ।
सन्दीप विश्भरकै फ्रेन्चाइज क्रिकेट खेलेका र यसअघि पनि सीपीएल खेलिसकेकाले उनी खरिद हुने सम्भावना अधिक छ । रोहित पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेटमा भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरको रेकर्ड तोडेपछि चर्चामा आएका हुन् । उनले सबैभन्दा कम उमेरमा ओडिआईमा अर्धशतकको विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् । मध्यक्रममा ब्याटिंग गर्ने रोहित लामाे प्रहार गर्न सक्ने भएकाले उनी टी ट्वान्टीका राम्रा खेलाडी हुन् । रोहितले हालै अण्डर १९ मा नेपाली टिमको नेतृत्व गरेका थिए ।
उता आफ्नै दममा टिमलाई जित दिलाउन सक्ने क्षमता भएका दिपेन्द्र सिंह ऐरी म्याचको अवस्थाअनुसार खेल्न सक्ने खेलाडी हुन् । उनि पीचमा टिक्न पनि सक्छन् आवश्यक परे हिटिंग पनि गर्न सक्छन् । हालसम्म विदेशी फ्रेन्चाईजी क्रिकेट खेल्ने नेपाली क्रिकेटर सन्दीपमात्र हुन् । उनी विश्वमै चर्चित छन् । अब अन्य खेलाडीले यो मौका पाउँछन् वा पाउँदैनन् त्यो भने २२ मे पछिमात्र थाहा हुनेछ ।